Google AdWords yeAgency | Zvese Zvishandiso Zvaunoda!
Google AdWords yeAgency: Ese makatengi evatengi vako ari pasi pekutonga
Neaya Google Ads emaAgency maturusi iwe uno chengetedza nguva kuti ugone kutarisa pane izvo zvinonyanya kukosha: vatengi vako.
The yakanakisisa nyaya chikwata-pfungwa Apps
Wana Notifications nemishumo iri nguva chaiyo wenyu nemakasitoma 'rutsigiro unongotaura.
Ziviswa nezve izvo zvinonyanya kukosha Google AdWords turu
Seta uye notifications kuti uzive kana shanduko dzikaenda pasi kana kana iwe uchida kukwidza mushandirapamwe
Wedzera Slack Wedzera Teams Wedzera Google Chat
Automatic Smart anorondedzera mwedzi wose
In-udzamu monthly reports inonyatsoratidza metric uye kukura kwemitezo yevatengi vako.
Yese data mune kamwe chete Google Sheets
Usatambise chechipiri pamaoko kuunganidza metric dzevatengi vako. Nyore uye nekukurumidza add them to a Google Sheet.
Download Google Sheet wedzera-pasi
Kuvandudza dzenyu nemakasitoma 'rutsigiro waivako
Unganidza data rese remushandirapamwe Google Sheets , gadzirisa zviyeuchidzo zvekuita pazvinenge zvichidiwa, uye tora maSports Reports emwedzi nemwedzi anogona kutumirwa kune vako vatengi.
Download Google Sheet wedzera-pasi Wedzera Slack Wedzera Teams Wedzera Google Chat
Zvizhinji Google AdWords yeAgency Maturu
Dzidza zvakawanda nezve maturusi edu akagadzirirwa Google AdWords nezvose zvatinogona kukupa iwe nebhizinesi rako.
Chii tinopa yako kushambadza sangano
Features, makomborero uye zvakanaka
Zvishandiso zvedu zvakagadzirirwa kugadzirisa chirongwa Google AdWords uye zvakagadzirwa Clever Ads kuita kuti hupenyu hwako huve nyore uye kukupa kutonga kuzere, nguva dzese uye kubva kwese kwaunoda, kwemakampeni ako neayo evatengi vako. .
Iwe unoda here kuti yako yese mishandirapamwe iwedzere, kusvika padanho, uye zvakananga mune yako Google chat ? Zvese izvi uye zvimwe zvakawanda ndizvo zvatinogona kukupa, zvese zvakagadzirirwa kukuudza izvo zvaunoda kuti uvandudze macompaign evatengi vako kuti uwane mhedzisiro.
Isu tinovimbisa kuti isu tine akanakisa AdWords kusangana, tsvaga zvimwe!
Anoponesa nguva, mari uye zviwanikwa!
Zvishandiso zvedu zvemasangano Google Ads akagadzirwa nechinangwa chekuchengetedza iwe mari, zviwanikwa, uye zvakanyanya kukosha .... Nguva!
Slack yedu, Microsoft Teams kubatanidzwa, Google Chat bot , Google Spre ads heets Wedzera-on, uye yedu Google Ads mushandirapamwe kugadzira, optimization uye kurodha, iwe unozokwanisa kushandisa yako yakakosha nguva pane izvo zvinonyanya kukosha: ako vatengi, uye uchine nguva yasara yekunakirwa iyo kofi yemangwanani yaunoda!
Tsvaga yakanakisa bhizinesi mikana, ita yakanakisa mishandirapamwe, tora zviziviso chete zvezvakanyanya kukosha kuti udzivise zvinokanganisa zvisina basa, uwane marepoti emwedzi, nezvimwe. Muchidimbu, maturusi akatarisana AdWords emaAgency ayo anokuchengetedza nguva yekutarisa pane izvo zvinonyanya kukosha.
Chii chaungaita namaturusi dzedu
Hwakadzama pamwedzi Mishumo iri paPDF kuti zvakakwana dzinoratidza metrics uye kukura kwako nemakasitoma 'danidziro. Nyanya Kufunga Data kuti nyaya kwamuri, uyere chete chii zvinokosha saka unogona kuponesa nguva iri kuongorora pasina kurasikirwa nezvemashandiro chii kukosha uye kuita yakaudza, sarudzo Data-chichisairirwa.
Shanduro Yekushandisa, Mazwi Akakosha ... Zvese zvaunoda kuti uzive mumishumo yakasarudzika. Ruzivo rwese rwaunoda, uye nemashandisiro aro Gadzirira mishandirapamwe yako uye makambani ako evatambi zvinoenderana nekuita kwavo, kuburikidza neakagadzirira-kushandisa-matipi uye kurudziro yakagadzirirwa zvakananga Google Adwords .
The yakanakisisa nyaya chikwata anotsanangura Apps
Gamuchira chaiyo-nguva ziviso uye mishumo pane yako vatengi 'mushandirapamwe kuita. Kana isu tichitaura AdWords , isu tinofanirwa kufunga kuti tishandise chishandiso uye tinoda kutora mukana wekugamuchira zviziviso nemishumo yemakampeni edu. Chii chaunoshandisa mune yako agency? Nechishandiso chedu iwe unozogona kubatanidza yako Google Ads account neimwe yeatatu anozivikanwa matimu ekutaura Slack : Slack, Microsoft Teams kana Google Chat . Sarudza uye gadzirisa mashandiro emakampeni evatengi vako ane data!
Get nezvokudzokera pamusoro chete chinonyanya kukosha zvinhu
Gadzira uye gadzirisa zviyeuchidzo zvako kuti uzive zvese zvinoitika mumishandirapamwe yako neyavatengi vako. Semuenzaniso, kana iwe uchida kuziva kana shanduko dziri kudonha kana kana mari yemushandirapamwe ichida kuwedzera, gadzira imwe yeedu ziviso uye isu tinokuzivisa iwe mukutaurirana kunyorera kwesarudzo yako! ( Slack , Microsoft Teams kana Google Chat ).
nzira iyi, iwe uchava mumwe kuratidza izvo parameters uchida tanga, iyo mashoko muchida kugamuchira, uye iyo zviitiko ichakurukurwa sevanhu vasinganzwisisiki uye vanofanira sezvinoratidzwa kwamuri kuti vachiziva avo inokosha nguva / mashoko .
Saka kuti hapana chinoenda chisingaonekwe uye macustomer ako evatambi anogara ari pamusoro! Google Ads yemasangano haina kumbobvira yave nyore
Usatambise imwe yechipiri nemaoko kuunganidza metric uye mushandirapamwe data kubva kune vako vatengi. Wedzera ivo vese zvirinyore uye nekukurumidza kune Google peji. Google Ads yemasangano zvinobudirira, uchishandisa zvishandiso zvinopihwa neGoogle uye nemamwe mapurogiramu anozivikanwa aunotoshandisa mune yako agency.
Google Sheets ndechimwe chezvishandiso zvinoshandiswa pasi rese mumabhizinesi ese ekuronga magwaro uye zvikwata? Kana iwe uri kuishandisa, iwe unogona kukwidzirisa maitiro ako uye kuve neyako data rako rakagadziridzwa muDhiraivha yako. Hazvigone kuve nyore!
Chii chinoita musiyano?
Nei uchishandisa zvishandiso zvedu Google AdWords ?
Clever Ads tinodada kuve chikamu chePrimeogamu Google Partner chirongwa, icho chatinovimbisa kuti maitiro acho akachengeteka 100% uye tinovimbisa kuti tinoremekedza rako rakavanzika data pamwe nevatengi vako '. Anopfuura mabhizimusi zana nemakumi mashanu nemakambani vakashanda nesu uye vakativimba isu kusimudzira yavo Google Ads zano uye kuita, nezvakanaka mhedzisiro Iwe hauzozvidemba, yakanakisa uye yakachipa (yemahara) nzira yekukwiridzira Google Ads kune vamiririri.
Nedu maturusi uye hunyanzvi isu takakwanisa kushandura chimwe chinhu chakaomarara uye chinotora nguva kuita chimwe chinhu chiri nyore uye chinokurumidza. Iwe unogona kutowana AdWords anonakidza nesu! Iwe unozogona "kutamba" nemishumo yedu uye matipi ekuwana yakanyanya ROI (Dzoka paInvestment) uye huwandu hwehuwandu usinga nyatso kuziva, zvese uchiri kudzidza!
Chinja agency yako kuita yereferensi agency Google Ads mushandirapamwe, akachenjera uye ane ruzivo mune ino maitiro pamwe Clever Ads . Isu tinogara tichiziva zvekuita zvinotevera, unogona kuvimba nesu kutora matanho ekutanga kana anotevera.
Tinotenda kuti chero agency yehukuru uye bhajeti inofanirwa kuwana kushambadza kweGoogle, saka isu takagadzira Google Ads maturusi emamiririri ayo anotendera iwe kukwikwidza padanho rekutamba nematanho akakura, ane ruzivo ane kushambadzira kukuru bhajeti.
Izvo zvikonzero nei iwe ungangoda kushandisa maturusi edu zvinogona kuve zvakasiyana, kunyangwe iwe uchifungidzira kuti vatengi vako ' Google Ads mishandirapamwe inogona kunge ichiita zvirinani, kunyangwe iwe uchida kutarisa kana wako wekushambadzira agency ari kunyatso kuita zvakanyanya, kana pamwe iwe uri kuda kuziva kana basa ravo rakaoma riri kubhadhara? Clever Ads AdWords ndiyo yako suite yezvishandiso.
Uye zvakare, timu yedu yenyanzvi yakagara yakagadzirira kukubatsira, uye iwe unogona kugara uchibata kwavari chero mibvunzo, zvinonetsa, mazano kana rubatsiro cleverads kumubatsiri @ cleverads .com, isu tichafara kukubatsira iwe neako agency ne chero chaunoda iwe neako agency.
Integrated Suite cheZvombo
Imwe bhenefiti kana bhenefiti yekushandisa edu AdWords maturusi Clever Ads masangano ndeyekuti iwe unokwanisa kuwana zvese kubva Clever Ads control panel, uye iwe unogona kusanganisa simba Google Ads Clever Ads kwemanejimendi iyo Clever Ads inokupa iwe. Yedu yese mishumo, chenjedzo, matipi anozokubatsira iwe kuti ugadzire zvakanyatsogadziriswa Google Ads mishandirapamwe yevatengi vako, kuti ugare uchienderana nenguva nemaGoogle maalgorithms matsva, mushandirapamwe wekuwedzera, nezvimwewo kuti ugadzire mabhenji makuru emakambani ako Ekuratidzira ekuratidzira, kana kunyangwe kugadzirisa kiyi kiyi mazano, pakati pezvimwe zvinhu. Yedu yese-in-one seti yakasarudzika Google Ads yeAgency maturusi akagadzirira kuita rese basa rakaomarara iwe uchipedza nguva yako uchiita zvaunogona kwazvo: kumhanya uye kugadzirisa bhizinesi rako uye kuita kuti vatengi vako vafare.
Team anotsanangura Apps yokukurukura
Sanganisa Google Ads Slack , Microsoft Teams , kana Google Chat
Gadzira yako yambiro yetsika kuti ugamuchire kamwe-nguva kana mishumo yevhiki nevhiki kuti uwane metriki kuburikidza nekutaura uye kugamuchira mairafu uye metriki zvine chekuita nekero yemutengi wako. Google AdWords iri nyore nekutaurirana kusangana seichi!
Ita kuti Google Ads agadzirirwe mahara.
Tora yekupedzisira kudonhedza kubva ads Clever Google Ads Audit uye kusimudzira yako Google Ads mishandirapamwe kuita kushoma.
Google Ads Mushanduri
Regai kuisa miganhu yako basa. Advertise kwese unoda! Shandura zvose mumitauro akawanda.
Kudzumburudza mhinduro dzako uye vanoziva mikana yakakwana kuti muhondo yako.
Zvakawanda Clever Ads zvigadzirwa
Zvose zvokushandisa zvaunofanira maximize ako vatengi 'digitaalinen yokutengesa danidziro.